Mpanentana Oksizenan'ny fitsaboana any Sina Ny olona be taona mifoka Oksizenina 10L ho an'ny mpamokatra sy mpamatsy hopitaly | Hemeikaineng
Mpanentana oksizenina ara-pahasalamana ny olona antitra fihenan'ny oksizenina 10L ho an'ny hopitaly
Ny concentrator oxygen dia karazana masinina izay mamokatra oksizenina. Ny fotokevitra dia ny fampiasana ny teknolojia fisarahana amin'ny rivotra. Voalohany, ny rivotra dia voahidy amin'ny hakitroka avo lenta ary avy eo ny fahasamihafana amin'ny teboka fanondrotenan'ny singa tsirairay ao amin'ny rivotra dia ampiasaina hanasarahana ny entona sy ny rano amin'ny mari-pana sasany, ary avy eo dia azo amin'ny fanitsiana bebe kokoa.
Ny concentrator oxygen dia mety amin'ny fitsaboana oksizenina sy fitsaboana ara-pahasalamana any amin'ireo toeram-pitsaboana sy fianakaviana.
Ireto no fampiasana lehibe indrindra:
1. Fitsaboana: Amin'ny alàlan'ny famatsiana oksizenina amin'ny marary, dia afaka miara-miasa amin'ny fitsaboana aretim-po sy aretim-panafody, rafi-pisefoana, pnemonia manelingelina maharitra ary aretina hafa, ary koa fanapoizinana entona sy soritr'aretin'ny hypoxia mahery.
2. Fikarakarana ara-pahasalamana ao an-trano: Hatsarao ny satan'ny famatsiana oksizenina ao amin'ny vatana amin'ny alàlan'ny famatsiana oksizenina hahatratra ny tanjon'ny famenon-oxygen sy fikarakarana ara-pahasalamana. Izy io dia mety ho an'ny olona antitra sy antitra, olona tsy salama ara-batana, vehivavy bevohoka, mpianatra fanadinana fidirana amin'ny oniversite ary olon-kafa manana hypoxia isan-karazany. Azo ampiasaina ihany koa izy mba hanafoanana ny havizanana sy hamerenana amin'ny laoniny ny fiasan'ny vatana aorian'ny havizanana ara-batana na ara-tsaina.
3. Ny concentrator oksizenina dia mety amin'ny hopitaly kely sy salantsalany, tobim-pahasalamana, tobim-pahasalamana sns ... any amin'ny tanàna, vohitra, faritra lavitra, faritra be tendrombohitra ary lembalemba. Mandritra izany fotoana izany dia mety ihany koa ho an'ny trano fitaizana be antitra, fitsaboana oksizenina ao an-trano, foibe fanatanjahan-tena fanatanjahan-tena, tobin'ny miaramila lemaka ary toerana fampiasana oksizena hafa.
5. Biby: mila fitsaboana oksizena ny biby.
Anaran'ny vokatra Mpanentana oksizenina 10L
fahadiovana 93 ± 3%
TOSIKARAT miasa AC: 220 / 110V ± 10% 50 / 60Hz ± 1
Fanerena fivoahana 0.04-0.08Mpa (tsindry> 0.08 azo namboarina)
Haavo tabataba ≤50dB
lafiny 365 x 400 x 650mm (L * W * H)
Lanja afa-karatsaka 31kg
Lanja tsy afa-karatsaka 33kg
Function mahazatra Mihoatra ny fanairana hafanana, fanairana tsy fahombiazan'ny herinaratra, fiasan'ny fotoana, fampisehoana ora fiasana.
Fomba azo atao Fanairana ambany fahadiovana, fiasan'ny Nebulizer, SPO2 Sensor, Flitter Splitter.
1. Famolavolana lovia ambony ho an'ny fitehirizana kojakoja.
2. Toerana anatiny lehibe mangatsiaka kokoa.
3. Tavy sivana sivana mololo porofon'ny rano sy vovoka.
4. Ny fizarazarana mikoriana dia azo zaraina ho 5 mikoriana.
5. Compressor famindran-toerana lehibe, mitazona ny androm-piainana 30% lava kokoa noho ny vokatra an-trano hafa.
6. Suit ho an'ny fandidiana 24 ora.
7. Gurantee kalitao: 2 taona.
1. OEM (pcs100 pcs) / ODM.
2. Ny vokatra dia nandalo fanamarinana CE, FDA, ISO, ROHS.
4. Misy koa ny concentrator oxygen 3L / 5L / 8L / 15L, ary misy flow & moisturifier roa.
Teo aloha: Novel Coronavirus (COVID-19) Antibody IgM, Kit Kitapo IgG
Manaraka: Fanatanjahantena fanatanjahan-tena mihosin-jiro elektrika fanatanjahan-tena fanorana Yoga